Tsamba yekukurudzira: chii icho, ndeapi marudzi aripo uye anoitwa sei (Mienzaniso) | Ehupfumi Zvemari
Paunonyorera basa nyowani, kana iwe uchida kunyorera chikwereti kubhangi, kana kunyangwe paunenge uchizodzidza chimwe chinhu, tsamba yekukurudzira inova chishandiso chinobatsira kwazvo icho chinokuvhurira madhoo uye chinoita kuti vanobvunzurudza vazarurire kwauri ..
Asi, Tsamba yekukurudzira chii? Unoshandisa chii? Tichakuudza zvese izvi nezvimwe zvakawanda pasi apa.
1 Ndeipi tsamba yekurumbidza
2 Zvishandiso zvetsamba dzekurumbidza
2.1 Tsamba yekukurudzira Jobho
2.2 Tsamba yekukurudzira yemunhu
2.3 Tsamba yekurumbidza yedzidzo
3 Chii chekuunza tsamba yekurumbidza
3.1 Basa rakakodzera
3.3 Ziva anokurudzira
3.4 Nguva yehukama
3.5 Maitiro uye hunyanzvi
3.6 Ndeipi chinzvimbo chawakabata
3.7 Kurudziro mutsara
3.8 Dhata uye siginecha
4 Maitiro ekukumbira tsamba yekukurudzira
5 Mienzaniso yetsamba dzekurumbidza
Ndeipi tsamba yekurumbidza
Tsamba yekukurudzira inogona kutsanangurwa se iro gwaro umo munhu anopa mukunyora kubvumidzwa kwekukosha kwako uye / kana hunyanzvi kuitira kuti zvionekwe muzvirongwa zvenguva yemberi, zvese pachedu uye nebasa.
Mune mamwe mazwi, tiri kutaura nezve chishandiso chako pachako apo mumwe munhu "achikurudzira" mumwe, achipa chiratidzo chekutanga zvichibva pahukama hunovabatanidza vese.
Inofanira kuratidza kugona, hunhu, hunhu, ruzivo uye kurovedzwa kwemunhu uye kupa kukosha kune kwake kusarudzika, kungave kwebasa, kubhangi, kwekudzidziswa ...
Zvishandiso zvetsamba dzekurumbidza
Tsamba yekurudziro ine akawanda mashandisiro. Muchokwadi, kune akawanda marudzi emakadhi erudzi urwu, kunyange akajairika ari:
Tsamba yekukurudzira Jobho
Iyo yakabatana nebasa, uye mariri a kurudziro kubva kune yaimbove mabasa kuitira kuti pave nemikana yakawanda muzvirongwa zvenguva yemberi.
Tsamba yekukurudzira yemunhu
Izvi zvakare zvine mashandisiro mazhinji, sezvo ichi chichigona kushandiswa zvese kumabhangi (kukumbira zvikwereti, zvikwereti, vimbiso ...) uye kuzvikoro, kurerwa kwevana ... inobatsira kune chero mamiriro ezvinhu anoda kubvunza kukosha kwako kutora rakatarwa basa. Ndosaka zvichikwanisa kunyorwa kwete chete nenyanzvi (makambani kwawakashanda) asiwo nevavakidzani, vaunoziva, vanachiremba ... Chero ani anoziva iwe unogona kutaura zvakanaka nezvako.
Tsamba yekurumbidza yedzidzo
Ivo anoshandiswa kunyanya padanho repayunivhesiti kana madhigirii epamusoro (Tenzi, makosi kunze kwenyika ...) uko zvinokurudzirwa izvi ziva kana iye ari munhu akafanirwa (kana kwete) wekudzidziswa.
Kunyangwe isiri kushandiswa zvakanyanya kuSpain, isu hatigone kutaura zvakafanana mune dzimwe nyika, uko, kuti uwane kumwe kudzidziswa, ivo vanoda kuti iwe uende nemazano uye kudzamara vadzidze havabvume kana kuramba kunyorera.
Chii chekuunza tsamba yekurumbidza
Iye zvino zvaunoziva kuti tsamba yekurudziro chii, pamwe nekushandisa kwaunogona kuiisa, inguva yekutsvaga zvakadzama mune zvemukati zvaunofanira kutakura. Kunyangwe paine mhando dzakasiyana dzekurumbidza, angangoita ese ane zvinhu zvakafanana, uye izvi ndeizvi:
Usaende kunoprinta uye nekupa tsamba yekukurudzira papepa rakatetepa, isina chitambi chekambani, ndoda kuti itaridzike seisina hunhu. Kunyangwe iwe ukasatumira iyo yekutanga (nekuti iwe unofanirwa kuichengeta iyo kuitira kuti mamiriro ezvinhu nyowani amuke), iwe unofanirwa kutarisira kuratidzwa kwetsamba.
Zvakanakisa ndezvekuti Unoipurinda pabepa rine chitambi chekambani uye, kana pasina, pabepa iro riine magiramu makumi mapfumbamwe pakukora, kuti riite rinoramba uye riite zvakanyanya.
Ngatitangei nemusoro. Kunze kwekunge munhu ari kuzogamuchira tsamba achizivikanwa, zvakanakisa kunyorera "Kuna iye angave ane hanya" kana "Vanodiwa Vanamwari / se" kufukidza boka rakazara. Iwe hauzomboziva kuti ndiani achakwanisa kuiverenga uye kutanga tsamba yekurumbidza zvisirizvo kunogona kuita kuti iwe urasikirwe nezvawaida kuzadzisa nazvo.
Ndokunge, kumunhu anonyora tsamba uye uyo anokurudzira mumwe. Asi hazvina kukwana kungoti "Ndiri Pepito Pérez", unozvida izvozvo Sanganisira zita rako nesurname, yako email kana nhamba yekufona uye, kana zvichibvira, zvakare ID yako.
Nenzira iyoyo, chero munhu anogamuchira tsamba, kana vachida rumwe ruzivo nezvako, vanogona kumubata uye kumubvunza zvakananga. Uye iwe zvakare unokwanisa kuwana ruzivo kubva kune iye anorumbidza kuti uone kana ivo vari "munhu akavimbika".
Kunyangwe iri tsamba yekurudziro yebasa, iwe pachako, kana zvedzidzo, iwe unoda gwaro iri kuti umise mhando yehukama hunobatanidza iwe, pamwe nenguva yawanga uine hukama ihwohwo. Semuenzaniso, kana iwe wakashanda X makore mukambani, kana wanga uri shamwari kwemakore X kana sevashandi, etc.
Maitiro uye hunyanzvi
Mune ino kesi isu tinoreva kune iyo nzira yekuve yemunhu watinokurudzira. Mune mamwe mazwi, taura nezve mafungire aunawo (asingapfuure matatu) uye chii chinozivisa iwe pabasa rako (kwete anodarika matatu).
Ndeipi chinzvimbo chawakabata
Kana iri tsamba yekurudziro yebasa, kana kana hukama hwauinahwo huri hwevashandi, hazvingarwadzi kuisa mhando yechinzvimbo chakaitwa, pamwe nerondedzero yemabasa.
Kana iri tsamba yeyunivhesiti, dhigirii raTenzi ..., munhu anokukurudzira iwe unogona kuve purofesa, uye anogona kutaura nezve kuita kwako semudzidzi.
Ichi chinhu chinowanzoitika, asi iwo rugwaro urwo rwaunogadzira mhando yepfupiso yezvose zvawataura, uye chikonzero nei tsamba yakanyorwa, zvichiratidza kuti munhu ari kukurudzirwa mushandi akanaka, munhu akanaka, kana mumwe munhu waunogona kuvimba.
Dhata uye siginecha
Kuti munhu agamuchire tsamba yekukurudzira kuti asimbise iyo data, ipfungwa yakanaka kuti aya ari pano, kwete siginecha chete yemunhu akanyora tsamba, asi zvakare yavo data, fomu rekubatana, kero yekambani (kana kero), nezvimwe.
Maitiro ekukumbira tsamba yekukurudzira
Zvino zvauve nezvakajeka, inguva yekukumbira tsamba yekukurudzira, asi unozviita sei? Mune ino kesi, kune akati wandei sarudzo:
Mukambani, zvakakosha kuti munhu ane chinzvimbo chepamusoro kupfuura chako uye anga achikuona, kana iwe wakashanda pasi pemazano avo, nekuti nenzira iyoyo vanozoziva zvakawanda nezvako nenzira yehunyanzvi. Asi izvo hazvikuregerere iwe kubva mukukumbira vaunoshanda navo tsamba yekukurudzira futi.
Kubuda sei muhupenyu hupenyu
Para Tsamba yekurumbidza wega, unogona kuikumbira kubva kune waunoshanda naye, shamwari, hama, kana kunyange muvakidzani. Unotenda kana kwete, aya makadhi anogona zvakare kushanda mushe uye achabatsira mumwe munhu kuti awane pfungwa yezvauri zvauri.
Tsamba yekukurudzira inofanirwa kukumbirwa pamberi, nekuti dzimwe nguva hazvisi nyore kunyora, uye zvinotora nguva. Panyaya yemakambani, izvi zvinowanzo kumbirwa kana hukama hwebasa hwapera, kuitira kuti ushande sechiwedzera chinongedzo kana uchitsvaga rimwe basa; asi hazvireve kuti haigone kuodha pane imwe nguva, kunyange chiri chinhu chisingawanzoitika.
Mienzaniso yetsamba dzekurumbidza
Chekupedzisira, heino mimwe mienzaniso yetsamba dzekurumbidza dzemhando dzakasiyana dzinogona kuuya zvinobatsira senge nhungamiro.
[Nzvimbo uye zuva]
Kuburikidza neiyi mitsara ini ndinokuzivisa iwe kuti [Zita rizere] aishanda mukambani yangu / bhizinesi / mukuchaja kwangu kwemakore matatu. Iye mushandi ane hunhu husina mhosva. Akaratidza kuve akagwinya [basa / bhizimusi] uye anoshanda nesimba, akazvipira, ane mutoro uye akavimbika kuita mabasa ake. Akagara achiratidza kunetsekana nekuvandudza, kudzidzisa uye kugadzirisa ruzivo rwake.
Mumakore aya akashanda se: [kuisa zvinzvimbo]. Naizvozvo, ndinotarisira kuti unogona kufunga nezvekurudziro iyi munzvimbo yako yebasa, sezvo ichizadzikirana nebasa rako nekuzvipira.
Pasina chimwe chinhu chekureva uye, ndakamirira kuti tsamba iyi itariswe, ndinosiya nhamba yangu yekubata kune chero ruzivo rwekufarira.
[Zita, surname uye chinzvimbo chemunhu kana kambani].
Ini ndinonyora inotevera inotevera kurudziro tsamba ndichifarira (zita uye zita remunhu akurudzirwa), inozivikanwa kuburikidza neyegwaro renyika nhamba (yekuzivisa nhamba).
Ini ndinonzi (Zita remunhu anonyora) uye ini ndinonyora ndichikwanisa (Ukama hunokubatanidza iwe nemunhu wacho, hungave hushamwari, vatinoshanda navo, vavakidzani ...) ye (zita remunhu akakurudzirwa) uye ane imba yazvino inopindirana nekero inotevera: (inozivikanwa kero yekugara, guta kana guta).
Ndinoda kutaura kuti (zita) munhu wepedyo, anokudzwa uye ane rupo munhu anogona kuvimbwa naye. Iyo yagara ichiteedzera nezvayo zvese zvemari kuzvipira nenzira ine mutoro.
Muhukama hwedu hwese, panga paine nguva dzinoverengeka dzatakatsigirana, uye (zita) rakagara richichengeta nguva uye rakaomarara, pamusoro pekupa rutsigiro pese pazvinodiwa Anoteerera uye akatendeseka.
Ini ndinosiya yangu yemunhu (nzira dzekubata, ingave foni kana email) inowanikwa kune chero munhu angave achizoda, kuti awedzere ruzivo kana kupindura chero mibvunzo inogona kuoneka mune izvi.
(Runhare kana e-mail)
(Zita uye zita remunhu anonyora)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Negocios » Tsamba yekukurudzira